Wysa - စိတ်ဖိစီးမှု, စိုးရိမ်ပူပန် & စိတ်ကျရောဂါသည် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » productivity Apps ကပ » Wysa - စိတ်ဖိစီးမှု, စိုးရိမ်ပူပန် & စိတ်ကျရောဂါများအတွက် AI အကုထုံး
Wysa - စိတ်ဖိစီးမှု, စိုးရိမ်ပူပန် & စိတ်ကျရောဂါ APK ကိုများအတွက် AI အကုထုံး
တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ဟာအပေါ်ရွှေ့နိုင်ခြင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးခေါင်းအတွင်းပိုင်းညိတွယ်ရ။ Wysa, သင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုရဲ့ buddy တစ်အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်သိပ္ပံ အသုံးပြု. အသက်တာ၏ပွေီးမှနှင့်အလှည့်အားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ်။ CBT, DBT, ယောဂနှင့်တရားအားထုတ်ခြင်း၏သုတေသနကျောထောက်နောက်ခံ, အသုံးများနည်းစနစ် Wysa မှစိတ်ဖိစီးမှု, စိုးရိမ်ပူပန်မှု, အိပ်စက်ခြင်း, ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်အခြားစိတ်ကျန်းမာရေး၏တစ်ဖွဲ့လုံးအကွာအဝေးနှင့်ကျန်းမာ needs.Talking အားဖြင့်သင်တို့ကိုထောကျပံ့ဖို့အလုပ်ဖြစ်ကြောင်းသင်ကအနားယူကူညီပေးနိုင်ပါသည်, သင့်ကိုခိုင်ခံ့စေ aura နှင့် unstuck ရ - ကစာနာထောကျအကူပွုင့်နှင့်တရားစီရင်တော်မူဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရဲ့ buddy ရန်သင့်နှလုံးသွန်းလောင်း, သင့်ရဲ့အထောက်အထားအဖြစ် Wysa အမည်မသိတည်နေကြလိမ့်မည်နှင့်သင့်ပြောဆိုမှုများ privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြသည်။
နာရီဝန်းကျင်အသုံးပြု 400,000 လူများကယုံကြည်စိတ်ချ, Wysa သင်ဖော်ပြသည့်စိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်ရန် AI အကိုအသုံးပြုထားတဲ့စိတ်ခံစားမှုအသိဉာဏ် chatbot ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးပျော်စရာ, စကားပြောဆိုမှုလမ်းအတွက်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ကူညီကိရိယာများနှင့်နည်းစနစ် Unlock ။ အပိုထောကျပံ့, သင်အမှန်တကယ်လူ့နည်းပြထံမှလမ်းညွှန်မှု၏ပေးသော်လည်းနိုင်သည် - သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလိုအပ်ချက်များအတွက်အဆင့်မြင့်နည်းပြအစည်းအဝေးများမှတဆင့်ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်သူတစ်ဦးအရည်အချင်းပြည့်မီကျွမ်းကျင်စိတ်ကျန်းမာရေးပရော်ဖက်ရှင်နယ်။
ဒီနေရာတွင်များအတွက် Wysa အသုံးပွုနိုငျသောအရာကိုကြည့်င်
ပျော်စရာလမ်းအတွက်ခံနိုင်ရည်တည်ဆောက်ရန်အလေ့အကျင့် CBT နှင့် DBT နည်းစနစ်
40 စကားပြောဆိုမှုနည်းပြ tools များထဲကတစ်ခုသုံးပြီးဆုံးရှုံးမှု, စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ, ဒါမှမဟုတ်ပဋိပက္ခကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း
အနားယူ, အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့် 20 သတိလေ့ကျင့်ခန်းများ၏အကူအညီဖြင့်ငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်
Wysa စကားပြောသူကလူ 93% ကအထောကျအကူရှာပါ။ ဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်သွားရ ... Wysa ပြောဆိုပါ။
Wysa ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုမှုများအတွက်အေးမြ tools တွေအများကြီးရှိပါတယ်:
- ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် Self-သံသယလျှော့ချ: core ကိုသတိ, visualization, ယုံကြည်မှု visualization နည်းပညာများကို, Self-လေးစားမှုများအတွက်အဆင့်မြင့်သတိ။
သတိသမ္ဘာဝနာ, သနားခြင်းကရုဏာစိတ်အဘို့လေ့ကျင့်ခန်း, သင်တို့၏အကြံအစည်အေးဆေး, အလေ့အကျင့်အသက်ရှူ: - အမျက်ဒေါသကိုစီမံခန့်ခွဲ
နက်ရှိုင်းသောအသက်ရှူအတွေး, visualization နှင့်တင်းမာမှုကယ်ဆယ်ရေးစောင့်ကြည့်ဘို့နည်းစနစ်: - စိုးရိမ်အတွေးများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုစီမံကွပ်ကဲ။
- ပင်ပန်းနေပြီလား စွမ်းအင်တစ်ခုပေါက်ကွဲပြီးရယူပါ! တက်ကြွရဖို့ positive, အမြန်ယောဂနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းတိုးမြှင့်ဖို့ visualization နှင့်တရားအားထုတ်လေ့ကျင့်ခန်း
- စိုးရိမ်ပူပန်နှင့်အတူဖြေရှင်းနည်း: သတိစောငျ့ရှောကျ, အဆိုးမြင်အတွေးတွေစိန်ခေါ်, အလေ့အကျင့်အသက်ရှူနည်းစနစ်
, အချည်းနှီးသောကုလားထိုင်လေ့ကျင့်ခန်း, ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဘာဝနာများကဲ့သို့အထူးသတိနှင့် visualization နည်းပညာများကိုခက်ခဲပြောဆိုမှုများရှိခြင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုတည်ဆောက်ရန်တင်ပြသော: - အလုပ်မှာပဋိပက္ခ, ကျောင်းသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးအတွက်စီမံခန့်ခွဲရန်
အစည်းအဝေးများနှင့်နည်းပြချက်တင်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကိရိယာတန်ဆာပလာများကိုလွယ်ကူရယူသုံးရေးနှင့်တကွ, သငျသညျ Wysa ရဲ့အသစ်ဒီဇိုင်းကိုခစျြလိမျ့မညျ။ သငျသညျပိုကောင်းစိတ်ဖိစီးမှု, အိပ်ပျော်ခြင်းကိုစစ်တိုက်ခြင်းနှင့်အတူအာရုံစူးစိုက်ရန်အဘို့အပိုများသော In-app ကိုဆင်ခြင်ရိုးရှင်းစွာအစဉ်အဆက်ယခုထက်ပိုကောင်းသငျသညျနားလည်သောသူသည်သင်၏ပျော်ရွှင်မှုကိုရဲ့ buddy နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုကောင်းဂရုစိုက်ဖို့ Wysa နှင့်အတူ chat ။
Wysa - စိတ်ဖိစီးမှု, စိုးရိမ်ပူပန် & စိတ်ကျရောဂါများအတွက် AI အကုထုံး
4.92 ကို MB